Nzira yekuwedzera sei kutengesa pane yangu E-commerce saiti? | ECommerce nhau
Nzira yekuwedzera sei kutengesa pane yangu E-commerce saiti?
Kutengesa ndizvo zvekutanga zvezvakakosha kana zvasvika kune e-commerce saiti, pasina kutengesa hapana mari, pasina mari hapana mari, uye kana usina chimwe cheizvi, saka chako e-commerce saiti yave kuita yechinyakare uye iri kukanganikwa nevanoishandisa. Pasina kupokana, kutengesa ndicho chinhu chakakosha mune aya masaiti, saka mune ino chinyorwa tichakupa mashoma matipi ekuti sei wedzera kutengesa kwako pane yako e-commerce saiti.
2 Saiti "Kumhara"
3 Usabvunze imwe data
Zvemagariro venhau zvakakosha Nekukunda kwekambani chero ipi, masocial network anoshanda kushambadzira bhizinesi rako kana mune ino saiti yako yekutengesa, mune izvi vashandisi vako vanogona kuziva nhau dzese, zvinopihwa, zvigadzirwa zvitsva zvinowanikwa mune yako saiti, uye kuburikidza neizvi unogona kuwana mari yakawanda. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kuwedzera mushandisi traffic pane yako e-commerce saiti uye wedzera mikana yekuti zvigadzirwa zvako zvichatengwa.
Nzvimbo yekumhara inotsanangurwa senge saiti ine kunanga kuwana kuburikidza neimwe saiti, izvi zvinogona kushandiswa sekushambadza pane akati wandei mawebhusaiti, kana iwe ukagadzira nzira pfupi kuburikidza neimwe webhusaiti kuti usvike yako saiti, izvi zvinogona kuwedzera maererano netraffic, rairo rakanakisa rekutengesa mu e-commerce saiti Iri kuve neyakawanda yekugara mushandisi traffic, saka kuburikidza nekushambadzira uye kumhara masaiti izvi zvinogona kuwedzera zvakanyanya
Usabvunze imwe data
Kubvunza zvakakwana izvo zvinodiwa kune vako vatengi zvakaringana, izvi zvinobatsira kuvaka hukama hwekuvimbika pakati pemutengesi nemutengi. E-mail, password, kero uye nzira yekubhadhara inofanirwa kukwana. Zera, murume kana murume, zvinhu zvinovaraidza ruzivo rusina basa, runogona kukanganisa kuvimba pakati pemushandisi nemutengesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Nzira yekuwedzera sei kutengesa pane yangu E-commerce saiti?
Maitiro ekuita yangu E-commerce saiti kuti ishandise?
Google inomira kuburitsa ma ads akasarudzika